निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल निर्माण कुनैपनि बहानामा रोकिनु हुँदैन् : सरोकारवाला तथा विज्ञहरु (प्रेस वक्तव्यसहित) | रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ असार १० मंगलवार, ०३:२२
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल निर्माण कुनैपनि बहानामा रोकिनु हुँदैन् : सरोकारवाला तथा विज्ञहरु (प्रेस वक्तव्यसहित)
२०७५ आश्विन २५ गते प्रकाशित, l १६:३५
नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले २०५० सालमा राष्ट्रिय हवाई नीति सार्वजनिक भएयता २०५३ मा संशोधन भएको सुनाए । उनले भने,‘२०५० साल यता यो विमानस्थल निर्माणको काम सरकारले अभ्यासको रुपमा मात्रै गरिरहेको छ । अहिले विभिन्न बाधा तथा व्यवधानहरु अघि सारेर योजना नै असफल बनाउन लागिपरेका छन् । तर, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हवाई मार्गलाई स्थापित् गराउन यो योजनाले भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।’
लाभान्वित एवं प्रभावित जिल्लावासी
मिति : २०७५ असोज २५
आदरणीय पत्रकार/मिडियाकर्मी बन्धु एवं सरोकारवाला, विज्ञ !
बारामा बन्ने दोस्रो अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलको चर्चापरिचर्चा सुरु भएको साढे दुई दशक भईसकेका छ । सन् १९९५ मा नै प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन पुरा भईसकेको यस राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको स्थलगत सर्वे गर्दा नेपालका अन्य ८ ठाँउमा भएको थियो । प्राविधिक, समरिक र भौगोलिक आधारमा अहिलेको स्थान छनौंट भएको हो । प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदनको आधारमा यो ठाँउ छनौंट हुनुमा कुनै राजनीतिक प्रभाव वा दबाव थिएन् । तर सबै राजनीतिक दलका चुनावी घोषणा पत्रमा साझा एजेण्डा थियो । यद्यपी अहिले विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा वातावरणीय प्रभावको नाममा विरोधका स्वरहरु गुञ्जिन थालेका छन् ।
२५ वर्षदेखि विमानस्थलको प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई अन्यौलमा राखिएको छ । विकासको निम्ती जन्मथलो छाडेर विकल्प सहित ब्यवस्थापनको पखाईमा छन् । विमानस्थलको धावन मार्ग प्रस्ताव गरिएको १४७६ धुरीको टाँगियाबस्तीमा विकास निर्माण ठप्प छ । एयरपोर्ट बन्ने ठाँउ भन्दै आधारभूत विकास समेत रोकिएको यहाँका जनतालाई अझैं कहिलेसम्म अन्यौलमा राख्ने ? बस्ती ब्यवस्थापनका लागि सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बनिसकेको अवस्थामा त्यसका आधारमा उचित ब्यवस्थापन हुने कुरामा हामी आशावादी छौं ।
टाँगियाबस्ती सरकारले २०३१ सालमा टाँगिया परियोजनाको नाममा त्यहाँका रुख कटान गरि नयाँ विरुवा हुर्काउन राखिएको जनताको विस्तारित बस्तीको रुपमा रहेको छ । विमानस्थलको निर्माणपछि वन विनासबाट सिचाईको समस्या आउने भनिएको छ, त्यसलाई नारायणीको पानी राप्ती खोलामा ड्राईभर्सन बनाई सिंगो बारा, पर्सालाई सिन्चित गर्न सकिने विकल्प छ । यसलाई तत्काल अघि बढाउन आवश्यक छ । विमानस्थल बनाउने क्रममा रुख कटान हुने सम्बन्धमा हामीले सरकारलाई आवश्यक रुख कटान गरि त्यसको क्षतिपूर्ती वापत रोप्नु पर्ने विरुवा रोप्ने कार्य देशका विभिन्न स्थानमा अहिले नै सुरु गर्न सुझाव दिन चाहान्छौं ।
यस सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट माननीय संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीले विमानस्थललाई हरित विमानस्थल बनाउने भनि दिएको अभिब्यक्ति स्वागत योग्य छ । साथै हामीले विमानस्थलभित्र प्रस्ताव गरिएको एयरपोर्ट सिटीलाई विमानस्थलसंगै जोडिएका नगरहरुमा सार्नुपर्ने माग राख्दै आएकोमा सरकारको तर्फबाट त्यसप्रति सकारात्मक कुरा बाहिर आएको छ । विमानस्थलसंगै जोडिएको निजगढ नगरपालिकालाई सरकारले स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम अघि बढाईसकेको छ । विमानस्थलबाट एयरपोर्ट सिटी बाहिर निकाल्दा त्यसबाट रुख कटानको संख्या निकै घट्न सक्छ ।
हामीले प्रदेश २ मा प्रस्ताव गरिएको दुई वटा राष्ट्रिय गौरबको आयोजना फास्ट ट्रयाक र एयरपोर्टको सम्बन्धमा तीन वर्षदेखि संघर्ष र समन्वय गर्दै आएका छौं । यस अघि विमानस्थल जस्तै अन्यौल र विवादमा घेरामा रहेको तराईलाई काठमाण्डौंसंग यातायात र भावनात्मक रुपमा जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि ६२ जना युवाको टोली ४ दिन हिडेर काठमाण्डौंमा आई तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित १२ वटा राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई ज्ञापन पत्रमार्फत विकास निर्माणमा साझा धारणा बनाउन आह्वान गरेका थियौं ।
अनशन, हस्ताक्षर संकलनदेखि जनताबाट लगानी संकलन अभियानसम्म सञ्चालन गरेको स्मरण गराउन चाहान्छौं । फास्ट ट्रयाक निर्माण हुने सुनिश्चित भईसकेको अवस्थामा परिपुरक आयोजनाको रुपमा रहेको विमानस्थलको बारेमा पछिल्लो समय आएका विभिन्न खाले चलखेलले हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । विकास निर्माणको कार्यमा सुझाव र निकाशको लागि बहसमा जुट्न सरोकारवाला विज्ञ समुदायलाई आह्वान गर्दछौं ।
हामी प्रदेश २ बासी यो आयोजना कुनै पनि बाहानामा गुमाउन चाहान्नौं । अब पनि कुनै बाहानामा आयोजना अल्झाई राख्ने अधिकार कसैलाई छैन् । तत्काल निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन र ५÷७ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने सुनिश्चितताको लागि सरकारसंग माग गर्दछौं । सबैखाले चलखेलका विरुद्ध हामी संघर्षमा उत्रिन तयार छौं । साथै हामीले स्थानीय स्तरबाट गर्नुपर्ने समन्वयका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्न चाहान्छौं ।